‘गुटको स्वार्थभन्दा माथि नउठे नेकपाको विघटनलाई कसैले रोक्न सक्तैन’ — News of The World
संसार न्यूज संवाददाताचैत्र २४, २०७५
नेपालको वाम तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लीलामणि पोखरेल कुनै चिनाइनुपर्ने नाम होइन । कुनै समय जनमोर्चाका मदन भण्डारी समेत भनेर चर्चामा रहने पोखरेल अहिले गुमनाम जस्तै छन । नेकपाको पोलिटव्युरो सदस्य रहेका पोखरेल पार्टी एकता प्रक्रिया र सत्ताको गतिका विषयमा के सोच्दा हुन् ? प्रष्ट वक्ता पोखरेलसँग यीनै वियषमा गरिएको सम्वादको संम्पाादीत अंश
कता हुनुहुन्छ आजकल ?
यतै छु । आफ्ना नियमित काम, पार्टीका काम यीनैमा निरन्तर लागिरहेकै छु ।
लिलामणी पोखरेलको चर्चा त छाउनै छाड्यो त ?
म आफ्नो कर्ममा निरन्तर लागिरहेकै छु । चर्चा भाको छ छैन मैले थाहा पाउने विषय पनि रहेन ।
तपाईको जीवननै वितेको पार्टी यति ठूलो भएको छ, सत्तामा छ तर तपाई मौन हुनुहुन्छ, दृश्यबाट बाहिर हुनुहुन्छ किन यस्तो ?
म हिजो जे थिए, आज पनि उहि छ । विचार निष्ठा र मान्यतामा प्रतिबद्ध छु । हिजो संकटको बेला थियो । म जस्ता कार्यकर्ताको आवस्यकता थियो । अहिले अवस्था सहज छ । सबैलाई मौका चाहिएको छ । हिजो जस्तो प्रतिक्रियावादीहरु सँग ठाडै जुध्नु पर्दैन, त्यसैले मलाई दृश्यमा नपाउनु स्वभाविक हो ।
तपाई निश्क्रिय हुनु आन्दोलनका लागि त्यति सुखद देखिदैन नि ?
पहिलो कुरा म निस्क्रिय छैन । खाली यत्ति हो, अहिले म हुलमुलमा जिउ जोगाउने प्रक्रियामा मात्रै छु । पार्टी ठूलो भएको छ । भीडभाड बढेको छ । यस्तो भीडभाडमा जीउ जोगाउनु, अनिकालमा बीउ जोगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । यत्ति मात्र हो, म हिजो जुन सिद्धान्त र चेतनाका साथ कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको थिए अहिले पनि त्यसमा प्रतिबद्ध छु ।
यसको मतलव अझै पनि हिजोकै धङधङीमै हुनुहुन्छ ?
त्यसरी पनि नबुझौ । माक्र्सवाद आफैमा परिवर्तनशील सिद्धान्त हो । यसकारण म पनि आवस्यकता अनुरुप परिवर्तनशील छु । कम्युनिष्टहरु कहिल्यै जड बन्न सक्तैनन् । यसकारण ममा पनि जडता छैन ।
अलिकति प्रसंग बदलौ, तपाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुरानो नेता अनेक टुट र जुट आन्दोलनभित्र देख्नु भयो, पछिल्लो जुट कहाँ अड्कियो यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
नेपालका दुई ठूला वाम दल एकै भएका छन् । एउटै पार्टी बनाएका छन् । यो त असाध्यै राम्रो कुरा हो । यहि एकताले एब्सोल्युट ‘मेजोरीटी’ को अवस्था आएको छ । देशले स्थिर सरकार मात्रै पाएको छैन, विकास र समृद्धिले समेत गति लिन थालेको छ । यो सुखद पक्ष हो । यस्तै चिन्ताको विषय पनि सँगसँगै रहेको छ । एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर सांगठनिक एकता हुन बाँकी छ । यसले ट्रयाक विराए ठूलै दुर्घटना निम्तिने खतरा पनि सँग सँगै रहेको छ ।
दुर्घटनाको कुरा गर्नु भयो,पार्टी पंक्तिमा पनि यो एकता दुर्घटनामा पर्न थालेकोमा चिन्ता बढेको छ यस्तो किन हुँदैछ ?
चिन्ता नै गर्नुपर्ने गरी एकता दुर्घटना तर्फ गएको छैन । तर, समयमै सचेत नबने दुर्घटनालाई टार्न पनि सकिदैन । अहिले तमाम बैचारिक र सांगठनिक प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । समयमै यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर नखोजिए परीणाम सुखद अवस्य पनि हुँदैन । पार्टीलाई कतिदिन सम्म ‘संक्रमणकालीन’ अवस्थामा राखिरहने ? यो विषयमा शीर्ष नेतृत्व र तमाम कार्यकर्ता चनाखो हुनै पर्दछ । अहिले छलफल र बहसहरु रोकिएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जब छलफल र बहस हुँदैनन् यसले विस्फोटको रुप धारण गर्न सक्छ । त्यसैले नेतृत्व समयमै सचेत हुनुपर्छ ।
एकथरी आलोचकहरुले पनि यहि एकताका कारण बिघटन पनि हुनसक्ने बताइरहेका छन्, पार्टीको गति हेर्दा पनि सत्यजस्तो लाग्छ नि ?
यसलाई असत्य बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ । पार्टी बिघटन र विभाजन कुनै कोणबाट पनि सह्य हुदैँन । नेतृत्वले समयमै आँखा खोल्नुपर्छ, कार्यकर्ताले दिमागको बिर्को खोलनुपर्छ ।
अलिकति महाधिबेशनको पनि चर्चा चल्न थालेको छ नि ?
हामीले पार्टी एकता गर्दा नै दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने घोषणा नै गरेका हौं । तर, पछिल्लो पटक पार्टीले लिइरहेको गतिका कारण त्यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा चाहि शंका छ । मैले माथि नै भनिसके, हामीले धेरै प्रश्नहरुलाई माझघरमा छोडेका छौ । ति प्रश्नको उत्तरका लागि महाधिबेशन समयमा नै गर्नुपर्छ ।
पार्टी एकता निष्कर्षमा नपुग्नुका कारण के होलान् ?
यसको मुख्य कारण गुटहरुको सन्तुलन मिलाउने नेतृत्वको चाहना हो । यदि पार्टी बनाउने हो भने हामी गुटको स्वार्थभन्दा माथि उठौं । नयाँ पार्टी निर्माणमा लागौं । यदि समयमै यसो गर्न सकिएन भने विघटनलाई कसैले रोक्न सक्तैन् ।
अन्त्यमा सरकारको गतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बाहिर भनिएजस्तो र प्रचार गरेजस्तो सरकारले केही नगरेको भने होइन । धेरै काम भएका छन् । आधारभुत संरचनाहरु तयार पार्ने काम भएको छ । सरकार विरुद्ध संसारभरीका प्रतिक्रियावादीहरु लागेका छन् । यसका बाबजुद पनि सरकार अघि बढिरहेको र आफ्ना कामहरु गरिरहेको छ ।